Inkomba yokuthuthuka yokuhambisa ngokuzayo.
Elihambayo ingenye main ukusebenza amathuluzi amabhizinisi zanamuhla, Logistics imishini kanye nemishini, kuyisisekelo inhlangano enengqondo ukukhiqizwa ngobuningi kanye nemishini ukugeleza inqubo. Kumabhizinisi wesithathu okuphathwa kwempahla, ukuhambisa kuyisisekelo sezinto ezibonakalayo nesobuchwepheshe sokuhlela ...
Izimbangela nezindlela zokuvikela ukushelela kwebhande
1. Ukungezwani kwebhande okunganele Uma ibhande lingenakho ukungezwani okwanele, ngeke kube khona amandla okushayisana anele phakathi kwepulley yokushayela nebhande, futhi ngeke likwazi ukudonsa ibhande nokuhamba kokuhamba. Idivayisi yokungezwani yokuhambisa ibhande imvamisa ifaka ukungezwani kwesikulufa, i-hydraulic ...
Ukuzimisela kwejubane kubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwebhande elihambayo, elihlobene nevolumu yokuhamba nezindleko. Ukwengeza ijubane lebhande lokuhambisa ibhande kungathuthukisa amandla wokuhambisa. Ngaphansi kwezimo ezifanayo zokuhamba, kungasetshenziswa umkhawulokudonsa omncane, futhi i-l ...